NIO သည် ဇန်နဝါရီလတွင် လျှပ်စစ် ကား ဝယ်ယူမှု လျှော့စျေး အစီအစဉ်ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည် - Pandaily
NIO သည် ဇန်နဝါရီလတွင် လျှပ်စစ် ကား ဝယ်ယူမှု လျှော့စျေး အစီအစဉ်ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်
Jan 04, 2022, 14:19ညနေ 2022/01/06 23:52:03 Pandaily
တရုတ် လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်သူNIO သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ကား ဝယ်ယူမှု လျှော့စျေး အစီအစဉ်ကို မကြာသေးမီက ကြေငြာ ခဲ့သည်အသစ္ စက္ စက္ ES8, ES6 ႏွင့္ EC6 မ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ မတိုင္မီ ၀ယ္ယူ ၿပီး BaaS ဘက္ထရီ ငွားရမ္း ၀န္ေဆာင္မႈ ကို ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူ သူမ်ားအေနျဖင့္ Standard Battery Pack (75kWh) အတြက္ ယြမ္ ၇၀, ၀၀၀ (ေဒၚလာ ၁၀၉ ၈၅) ႏွင့္ Long Battery Pack (100kWh) အတြက္ ယြမ္ ၁၂၈, ၀၀၀ ေလွ်ာ့ ခ်ေပး ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် လျှပ်စစ် ကားများ ဝယ်ယူ ရန် တရုတ်၏ ထောက်ပံ့ ငွေကို နောက်ထပ် ၃၀% လျှော့ချ လိမ့်မည်။တရုတ် ဗဟို ၀ န်ကြီးဌာန များနှင့် ကော်မရှင် ၄ ခုဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေနႛက ေဳကညာ ခဲ့ပၝတယ္။ ထို႔အျပင္ ၂၀ ၂၂ ခုႏွစ္ သည္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ့သည့္ လွ်ပ္စစ္ ကား ေထာက္ပံ့ ေငြကို အစိုးရက ေပးေခ် ရမည့္ ေနာက္ဆံုး ႏွစ္ ျဖစ္ မည္ဟုလည္း မူ၀ါဒ စာရြက္စာတမ္း က အတည္ျပဳ ထားသည္။
ထို့ကြောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင် စားသုံးသူ များစွာ သည်သူတို့၏ မော်တော်ယာဉ် များ ကိုကြိုတင် စာရင်းသွင်း ရန် ရွေးချယ် ခဲ့ပြီး ထောက်ပံ့ ငွေကို ခံစား ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
အဆိုပါ ေထာက္ပံ့ေၾကး ျပန္လည္ က်ဆင္း ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ NIO က ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ မတိုင္မီ ES8, ES6 ႏွင့္ EC6 တစ္စီး ၀ယ္ယူ ရန္ စရံ ေငြ ေပးသြင္း ၿပီး ၂၀ ၂၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္ မတိုင္မီ ကား ရယူ ႏိုင္ သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ဆက္လက္ ရရွိ ႏိုင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း ကြာဟ မႈကိုလည္း EV ထုတ္လုပ္ သူမ်ားက က်ခံ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:NIO သည် ET5 ကို လွှတ်တင် ပြီး လာမည့် စက်တင်ဘာလတွင် စတင် မည်
၂၀ ၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် NIO သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ နှင့်တစ် နှစ်လုံး အတွက် ၎င်း၏ တင်ပို့ မှုကို ကြေငြာခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် NIO သည်ကား အသစ် ၁၀, ၄ ၈၉ စီးကို တင်ပို့ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၄၉. ၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် NIO သည်ကား အသစ် ၉၁, ၄ ၂၉ စီးကို တင်ပို့ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၀၉. ၁% တိုးတက်ခဲ့သည်။
Tags electric vehicle | NIO EC6 | NIO ES6 | NIO ES8 | NIO∗ | subsidy
NIO $2824.2 အထိ နှောင့်နှေး အမိန့် များအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ ကမ်းလှမ်း
တရုတ် လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်သူ Neo က မကြာသေးမီက မှာယူ ခဲ့သော ဖောက်သည် များအား စုစုပေါင်း ယွမ် ၁ ၈၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၂၈ ၂၄. ၂၀) လျော်ကြေးပေး မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Auto Dec 03 ဒီဇင်ဘာ 7, 2021
NIO ကား ေဟာင္း အေရာင္းအဝယ္ ဝန္ေဆာင္မႈ စမ္းသပ္ ေျပးဆြဲ မႈ စတင္
တရုတ် ကား ထုတ်လုပ်သူညို မြစ်အသုံးပြုသူ များအကြား အခမဲ့ ယာဉ် ကုန်သွယ် မှုအတွက် ပလက်ဖောင်း တစ်ခု ပေးရန် တရားဝင် အသုံးပြု ထား သောကား "ပိုင်ရှင် တိုက်ရိုက် အရောင်း" ၀ န်ဆောင်မှု ကိုစမ်းသပ် ခြင်း။